Archive du 20200117
Edito Demokrasian’ny fanagiazana
Tsaroana ny fanakianan’ny mpanohitra azy ilay filoham-pirenena iray ho mpanao ampihimamba.
Oram-be mikija Tapaka ny RN 13, mitoka-monina i Betroka
Vokatry ny oram-be nikija any an-toerana dia miato ny fifamoivoizana amin`ny RN 13 izay mandalo any Betroka noho ny fikaohan-driaka ny arabe hiditra amin’ny tanànan`i Betroka ka lasa lavaka be.
Sehatra harena ankibon’ny tany Tsy maintsy hirosoana ny fanavaozana ny lalàna
Tsy maintsy hiroso amin’ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany ny fanjakana, araka ny tatitry ny minisitra tompon’andraikitra, Fidiniavo Ravokatra omaly tetsy Ampandrianomby.
Seranam-piaramanidina manerana ny nosy Hosokafana ho an`ny sehatra tsy miankina
Ny taona 2015 no nafindra tamin`ny orinasa ADEMA ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina miisa 44 manerana ny nosy.
Fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara Nopotehina nanomboka ny taona 2009
Tsy noterena, tsy novozonana ny fitondrana tetezamita 2009 namoaka ireo didim-panjakana miisa 3 izay nolazaina tamin’izany fotoana fa antoka ho amin’ny fampandrosoana ny
EPP ANDOHARANOFOTSY Vita ny asa fanavaozana, notokanana omaly
Vita tanteraka ny asa fanavaozana ny EPP ao Andoharanofotsy, kaominina Andoharanofotsy,